Emuva ku-Sizzle: Indlela Abakhangisi Be-E-Commerce Bangasebenzisa Ngayo Ukudala Ukwandisa Ukubuyisela | Martech Zone
Izibuyekezo zobumfihlo ze-Apple zishintshe ngokuyisisekelo ukuthi abathengisi be-e-commerce benza kanjani imisebenzi yabo. Ezinyangeni kusukela kwakhishwa isibuyekezo, amaphesenti amancane kuphela abasebenzisi be-iOS akhethe ukungena ekulandeleleni izikhangiso.
Ngokwesibuyekezo sakamuva sikaJuni, abanye abasebenzisi bezinhlelo zokusebenza ezingama-26% emhlabeni jikelele bavumele izinhlelo zokusebenza ukuthi zizilandelele kumadivayisi we-Apple. Lesi sibalo besiphansi kakhulu e-US ngo-16%.
Ngaphandle kwemvume ecacile yokulandelela umsebenzi wabasebenzisi kuzo zonke izindawo zedijithali, amasu amaningi omkhankaso abakhangisi abathembele kuwo awasenakwenzeka. Abakhangisi be-e-commerce bazoba nesikhathi esinzima kakhulu njengoba ubuhlakani obunamandla ababusebenzisele ukukhumbuza abasebenzisi ngemikhiqizo abayibhekile noma abayishiye ezinqoleni zabo seyincishwe kanzima.
Amasu azanyiwe nayiqiniso okulandelela izikhangiso ngeke awele endleleni ngokuphelele, kodwa azoshintsha kakhulu. Inani lethrafikhi elinika amandla amandla okukhawulela ukulandelela izikhangiso (LAT) iyakhula emhlabeni wangemva kwe-14.5, futhi imiphumela ethuthukisiwe abayikhiqizayo ngokuqhathaniswa nethrafikhi ye-LAT ikhuthaza abathengisi ukuthi babhide kakhulu kunangaphambili. Ukuze basebenzise leli thuba kanye namanye amathrendi, abakhangisi be-e-commerce kuzodingeka baguqule indlela yabo yokudala ukukhangisa. Nazi ezinye zezindlela eziyinhloko zokudala ezizohlala ziyithuluzi elibalulekile lempumelelo ye-e-commerce, namathiphu wabakhangisi abafuna ukukhulisa imbuyiselo yabo ekuchithweni kwezikhangiso njengoba lezi zinguquko ziqala ukusebenza.
Ukushoda kwedatha yomsebenzisi kudinga ubuhlakani obunokukhanga okubanzi
Ubuciko obuhle noboqobo buzosiza amabhrendi ukuzehlukanisa phakathi kwemakethe egcwele abantu, ngisho nangaphandle kokusebenzisa amathuluzi okukhomba. Ngenkathi izama ukuzuza ukufinyelela okukhulu, amabhizinisi avame ukuphendukela ezikhangisweni ezimbi nezejwayelekile. Kodwa ukusakaza inetha elibanzi akusho ukuklama okudonsayo. Uma ungakwazi ukuthembela ekufinyeleleni umuntu othize, ubuciko bakho kufanele bungenakuvinjelwa abantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Abakhangisi abatshala imali ekusunguleni okuyingqayizivele bazoba nesikhathi esilula sokudonsa ukunaka kanye nokuthola amakhasimende amasha endaweni ebanzi kakhulu ye-bell curve.
Ubuciko besikhangiso buyethula ithuba lokuxhumana nobuntu bomkhiqizo wakho emhlabeni. Emabhrendi amaningi, lokho kuzosho ukumatanisa okubonakalayo okudonsa amehlo nomlayezo onamandla. Ukungabikho kwedatha yezinga lomsebenzisi kwenza kubaluleke nakakhulu kubakhangisi ukuthi balethe ubuciko obunomthelela, besebenzisa izwi lomkhiqizo elicacile ukuletha ukuzizwisa kwamakhasimende okukhumbulekayo. Abakhangisi kufanele bagxile emilayezweni exhumanisa amanani emikhiqizo nezimpilo zabathengi. Cabanga ukuthi noma ubani obona ubuciko bakho besikhangiso uhlangabezana nomkhiqizo wakho okokuqala ngqa; yini okufanele azi lowo mthengi ngenkampani yakho? Linganisa imilayezo ecacile, enamandla ngamasu okuxoxa indaba avusa amadlingozi ukuze wenze okuvelayo okuhlala njalo. Njengoba isisho esidala sokuthengisa sihamba: ungathengisi inyama yenkomo, thengisa isisiphu.
Thuthukisa imizamo ye-organic ukuxhumana nabathengi lapho bekhona
Abathengi banamuhla balindele ukuthi bakwazi ukuxhumana ngenkuthalo futhi baxoxe nemikhiqizo mayelana nokuthi yini ebalulekile kubo. Ukudala okusebenzayo kuvumela amabhrendi ukuthi anikeze lolo hlobo lolwazi lwengxoxo ngamasu emvelo afana nenkundla yezokuxhumana. Isibonelo, izinkundla eziningi zenkundla yezokuxhumana zinikeza abasebenzisi inketho yokuvolontiya ngedatha ethile yezibalo zabantu ukusiza ukuthuthukisa ulwazi lwabo. Ukuxhumana nabathengi lapho asebevele beqoqene khona akunangqondo, futhi amakhono ayisisekelo okukhomba enkundla asiza ukubuyisela okunye ukucaciswa kwabantu okulahlekayo ngaphandle kokulandelela izikhangiso. Abathengi nabo banikezwe amandla amaningi kunangaphambili okuvota ngezikhwama zabo zemali, ngakho abakhangisi kufanele bagxilise ubuciko babo - kanye nezingxoxo ezibakhuthazayo - ngombono kanye nomuzwa wezindinganiso zenkampani.
Shintshanisa izincomo ezifanele ngemikhiqizo edumile
Izinyathelo ezintsha zobumfihlo ze-Apple zizoqeda ukwenza ngokwezifiso izincomo zomkhiqizo othile ngokusekelwe ekuziphatheni kwangaphambilini kwamakhasimende kunoma ubani ovimbela ukulandelela. Esikhundleni semikhiqizo efanayo, abakhangisi kufanele bagxile kulokho okudumile. Ubuciko besikhangiso obugqamisa imikhiqizo edayiswa kakhulu kwenza utshalomali oluhlakaniphile ngoba kuveza kokubili amakhasimende azoba khona kanye nakhona ezintweni osuvele wazi ukuthi zihambisa inaliti yebhizinisi lakho.
Isimo sengqondo somhlambi sinikeza abathengi ukuzethemba emikhiqizo emisha futhi kubenza babe maningi amathuba okuthenga imikhiqizo ethandwa ngontanga yabo. Yingakho ukufaka abathengisi abahamba phambili ekusunguleni kwakho izikhangiso kuyindlela enhle yokukhulisa ukwethenjwa nokuqondisa amakhasimende amasha ngokusebenzisa ifaneli yokuthengisa, ngisho nangaphandle kwamaphoyinti edatha ajulile mayelana nokuthi bangobani nokuthi banendabani.
Gqamisa izihlukanisi eziyinhloko nezici zomkhiqizo ezihlukile
Amabhrendi angaphinda aphathe ukungabi bikho kolwazi oluningiliziwe mayelana namakhasimende angaba khona njengethuba lokugqamisa izahlukanisi ezibalulekile ezenza imikhiqizo yazo ikhetheke. Ukuhlaziya idatha yokuthengisa kuzosiza amabhrendi anqume ukuthi yini eyenza imikhiqizo yawo ikhumbuleke. Ngemva kwalokho ungathuthukisa ubuciko obukhuthaza lezo zici, njengemikhiqizo esebenzisa usayizi wangempela, uchungechunge lokuhlinzeka oluqhubekayo, noma ukusetshenziswa kwezinto ezigaywe kabusha.
Ukulalela amakhasimende akho mayelana nokuthi yini ehambisana nawo futhi kuyisu eliwusizo; ukubuyekezwa kwekhasimende lami kanye nokuzibandakanya kwenkundla yezokuxhumana ukuze uthole imininingwane eyingqayizivele yokuthi amakhasimende athanda ini ngomkhiqizo wakho futhi athuthukise ubuciko obubungaza lezo zici. Futhi ungesabi ukuncika emaphuzwini okuhlukanisa akhuthaze amakhasimende adlule ukuthi athembeke ngempela umkhiqizo, noma ngabe abengalindelekile kangakanani.
Ukudala ngeke kwenziwe ngendlela efanele futhi kuncane kakhulu emhlabeni wangemva kwe-14.5. Kodwa ikakhulukazi njengoba izinga lokungena ekulandeleni umkhangiso likhuphuka kanye nokutholwa kwe-iOS 14.6 nangaphezulu, ubuciko buzoba ithuluzi elibalulekile labakhangisi abafuna ukuxhumana nabathengi abasha kanye nokuphumelela ezithamelini ezingaziwa. Njengazo zonke izinto ezintsha zobuchwepheshe, ukuziphendukela kwemvelo kuyindlela eya phambili. Ukuze abakhangisi baphumelele, kuzodingeka bazivumelanise futhi baguqule ukuqonda kwabo kobuciko kanye nezinhlelo zakho zokusebenza eziningi ezinamandla.
Tags: apple privacykokudalaezokuhweba ngekhompyuthaabadayisi be-ecommerceukumaketha kwe-ecommerceiOSIthrafikhi ye-LATbuyela ekuqhatheleni isikhangisobuyela ekusunguleni